Mormiin Barsiisotaa Humna ummataa dabalachudhaan deebi’ee dhoohuun waan hin oolle! | Biiftuubilisummaa
← Omishi Shonkora Al-Abash yeroo lammataaf Hektarri 50 Barbadaaye
Ummanni Oromoo Ona Gadabasaasaa Nu dhaqqabaaf Iyyachaa jiru! →
Mormiin Barsiisotaa Humna ummataa dabalachudhaan deebi’ee dhoohuun waan hin oolle!
Posted on April 17, 2012	by biiftuubilisummaa
Barsiisonni biyyattii daballii mindaa mootummaan Wayyaanee taasise jedhu kan caalattuu jireenya isaanitti miyeessee fi kan sadarkaa ogummaa isaanii gadi buuse ta’uu ibsachudhaan gochaa Wayyaanee kana mormudhaan torbee lamaan dura hojii dhaabanii mormii cimaa dhageessisuun ni yaadatama. Sochiin kun gochaa homnootni mormitoota dhaabbilee siyaasaa Habashaa fi tarkaanfii humnaa wayyaaneen hammeessite irraa kan ka’e humna qindaa’ee isaan qajeelchu dhabuun akkaataa eegaletti itti fufuu baatus, sochii kana kan kakaasaa turan barsiisota mootummaan “miseensota kooti” jedhee amanu hunda waan ta’eef, gama barsiisotaatin mootumman miseensa isa deeggaru akka hin qabne kan ummata hubachiisee fi mootummaa Wayyaanee miseensonni isaallee isa gananii qullaa dhaabbachaa akka jiru baruumsa guddaa kan kenne ture.
Mormii kana itti fayyadamuuf jecha humnootni Habashaa mormitoota mootummaa ta’an barsiisota koree qindeessituu mormii kanaa turan asii fi achi harkisudhaan tokkummaa isaanii laaffisanii gidduutti mootummaan akka laayyotti qaawwa kanatti fayyadamudhaan tarkaanfii humnaa fudhatteen barsiisotni gariin wal saaxilanii, gariin immoo haala mijataa dhabuurraa “ kan garaa gaaraatti deeffanne” jechudhaan yeroof callisuu filataniiru.
Sochiin kun ukkaamsaa mootummaan barsiisotarratti cimsitee fi shira mormitoonni Habashaa human kana butachuuf jecha raawwatan irraa kan ka’e, yeroof kan qabbanaa’e fakkaatus kaayyoo fi akeekni mormii kanaa (dhaamsi isaa) ummata guututti waan faca’eef, bubbulee Warraaqsa ummata guututiin deebi’ee dhoohuun waan hin oolle!
Mormii barsiisotaa kanaan walqabatee gartuun Mallas Zenaawii akka malee nahudhaan mormii kana kichuutti kutuu irratti mari’achuuf Walga’iiwwan ariifachiisoo hedduu gaggeessaa turan. Isaan keessaa:
Walga’ii Ariifachiisaa 1ffaa – Barsiisota miseensota Wayyaanee ta’an waliin:
-Walga’ii kanarratti barsiisonni: “…miseensa taanus, gaaffiin kun kan barsiisota guutuu biyyaati waan ta’eef dura dhaabbachuun nutti ulfaata;” jechuudhaan isaanis mormii kanaan ala ta’uu akka hin dandeenye ifatti waltajjiirratti dubbachaa turan. Haalli barsiisota miseensa ta’anii kun caalatti yaaddoo dabalataa kan itti uume mootummaan Wayyaanee haala kana tasgabbeessuuf tarkaanfii itti amane kamiiyyuu fudhachuuf akka dirqamu barsiisota walga’iirratti hirmaatan akeekkachiisudhaan walga’ii ariifachiisaa kan birootti ce’e.
Walga’ii Ariifachiisaa 2ffaa – Barattoota “Top ten” jedhaman waliin. (Barattoota kutaarraa
Sad. 1ffaa-10ffaa bahan)
Walga’ii kanarratti ergamtoonni Wayyaanee walga’icha gaggeessan barattoonni kunniin mormii barsiisotaa dura akka dhaabbatanii barattoota barsiisotarratti kakaasuuf yaalaniiyyuu, barattoonni dhimma kanarratti mar’achuun yaa hafuutii ajandaa marii dhimma kanaayyuu dhaggeeffachuuf fedhii akka hin qabne iyyassaa fi foricaan galma buqqisuuf kaanaan Kaadiroonni walga’icha itti dhiisuf dirqaman.
Walga’ii Ariifachiisaa 3ffaa – Maatii Barattootaa Waliin:
Walga’ii Ebla 1 fi 2, bara 2012 taa’ame kanarrattis Ergamtoonni Wayyaanee maatii Barattootaa walitti qabuudhaan mormii barsiisota kana balaaleffachudhaan dhuma walga’ii irratti ibsa ejjannoo isaanii miidiiyaaf akka ibsan gaafatan. Ummanni /maatiin barattootaa/ “… jireenyi barsiisotaa jireenya hundi keenya itta rakkachaa jirru irraa garaagarummaa waan hin qabneef deebisnee ofuma mormuu hin dandeenyu; kanarra mootummaan jireenya ummanni biyya keenyaa itti rakkachaa jiru kanaaf fala irratti osoo mari’annee wayya “ jechuudhaan ajandaan marii kanarratti akka jijjiiramuuf gaafatan. Dabballoonni walga’icha gaggeessuuf dhufan immoo nuti ajandaan irratti mari’achuuf dhufne kana jijjiiruu hin dandeenyu.” Jedhan. Ummannis akkas taanan nutis dhimma fala hin qabne irratti hin mari’annu jechuun hirmaattonni 80% ol ta’an galma walga’ii gadhiisanii kan bahan yoo ta’u, miseensonni fayyadamtoota sirna kanaa ta’an muraasni qofti walga’icha itti fufudhaan ibsa ejjannoo isaanii TV Itoophiyaatti lallabataniiru.
Walga’ii Ariifachiisaan Warraaqsa Dorrobe hin guusu!